मुख्य परिवर्तनहरू तपाईंले आफ्नो वार्षिक बिक्री किक-अफ बैठक गर्न आवश्यक छ Martech Zone
यो हुन गइरहेको छ कि वर्षको फेरि समय, जब बिक्री र बिक्री सक्षमता नेताहरू उनीहरूको वार्षिक बिक्री किक-अफ बैठकहरू योजना गर्दैछन्। यो कुनै सानो कार्य होईन। गन्तव्यको छनौट गर्न कोठाको आधारभूत रसदको अतिरिक्त, कोठाहरू रोकिने र बैठक ठाउँ पत्ता लगाउने, शीर्ष गत वर्षको बैठकको एक अव्यक्त दबाव हो। हामी कसरी यसलाई अझ ठूलो र अझ राम्रो बनाउन सक्छौं? कुन अतिथि वक्ताहरूले प्रेरणा पाउनेछन्? के शीर्ष पुरस्कार प्रदर्शन गर्न को लागी पुरस्कार को अर्थ हुन्छ?
हामीले बुझ्यौं। हामी आफैंले धेरैलाई आफ्नो क्यारियरमा सम्मिलित गरेका छौं, र हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई सोधेर उनीहरूको टोलीको लागि किक-अपहरू लागू गर्न मद्दत गर्दछौं: के हुन्छ यदि तपाईंले आफ्नो बैठक ग्राहकको दृष्टिकोणबाट योजना बनाउनु भयो? यहाँ पाँच ग्राहक केन्द्रित विचारहरू छन् जुन तपाईले अर्को वर्षको बैठकलाई अझ राम्रो बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
रणनीतिक खाता योजना। जब हामी रणनीतिक खाताहरूको बारेमा सोच्दछौं, हामी हाम्रो शीर्ष खाताहरू, हामीबाट धेरै खरीद गर्ने ग्राहकहरूको बारेमा सोच्दछौं। किक-अफ बैठकमा प्राय: राजस्व वृद्धि गर्न र साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन के कस्ता थप उत्पादनहरू र सेवाहरू बेच्न सकिन्छ भनेर समीक्षा गर्न समय छुट्याइएको हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण काम हो, तर चाँडै इन्सुलर हुन सक्छ — म, म, हामी। हाम्रो उत्पादनहरू, हाम्रा सेवाहरू, हाम्रो तल्लो लाइन। रेफ्रेम? तपाई कसलाई आफ्नो रणनीतिक खाताको रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने बारे पुनर्विचार गर्नुहोस् चरम सीमा र मुख्यधारहरू। तपाईंको मुख्य धाराका ग्राहकहरू ती ठूला खाताहरू हुन सक्छन् जसले तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको महत्त्वपूर्ण मात्रामा खरिद गर्छन् र रमाउँदछन्। तर तपाइँले तपाइँको केहि चरम ग्राहकहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ: कुन ग्राहकहरू तपाइँको उत्पादनहरू र सेवाहरूको साथ सबैभन्दा चाखलाग्दो कामहरू गर्दैछन्? उनीहरूलाई ग्राहक प्यानलमा सामेल हुन आमन्त्रित गर्नुहोस् र उनीहरूको रणनीतिक खाताहरूको बारेमा कुरा गर्न सोध्नुहोस्।
तपाइँका शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरू पहिचान गर्न ग्राहकहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस्। बिक्री व्यक्ति कडा परिश्रम गर्दछ - र तपाइँको उत्तम बिक्री मानिस सजिलैसँग क्षेत्र मा अलग हुन सक्छ। यी र अन्य धेरै कारणहरूको लागि, उनीहरूका साथीहरूको अगाडि तपाईंको शीर्ष प्रदर्शनकर्ताहरू चिन्न यो महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँका शीर्ष प्रदर्शन गर्ने ग्राहकहरूलाई उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न आमन्त्रित गर्ने विचार गर्नुहोस् - उनीहरूलाई एक पुरस्कार दिनुहोस्। यो सायद तपाईको टीमले प्राप्त गर्न सक्ने सब भन्दा राम्रो प्रशंसा हो।
समान परिस्थितिहरूको साथ प्रेरणा प्रेरणा। हामी प्रायः हाम्रा ग्राहकहरूबाट सुन्दछौं जुन उनीहरू प्रेरित गर्न चाहन्छन्। ग्राहकहरू उत्प्रेरित बिक्री पेशेवरहरूसँग काम गर्न चाहन्छन् जसले तिनीहरूलाई सोच्न मद्दत गर्दछ बक्स बाहिर। यो जहाँ एनालगहरू आउँदछन्। ठूलो एनालगको साथ आउनको लागि एक विशेष समस्यामा एक पल्ट प्रतिबिम्बित गर्नुहोस् तपाईंको व्यवसाय पार गर्न कोशिस गर्दैछ। त्यसोभए, बिल्कुल भिन्न सन्दर्भहरूमा विचार गर्नुहोस् जहाँ व्यक्तिहरूले त्यहि समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा तरिका निकालेका छन्। यहाँ एक उदाहरण छ:
हामीले काम गरेका एक टोलीले उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूसँग पर्याप्त जोडिएको सोच्दैनन्। उनीहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको सफलतालाई पर्दा पछाडि भएको धेरै कामले महसुस गर्‍यो, जसले टोलीको प्रेरणा गुमायो। एनालग: यो टोलीको बैठक न्यु अर्लिन्समा भइरहेको थियो, त्यसैले हामीले उनीहरूलाई इमरिल लगसेको प्रसिद्ध रेस्टुरेन्टहरूमा भेट्न गयौं। यस टोली जस्तै धेरै, शेफ र सुस शेफहरू दृश्यको पछाडि काम गर्छन्, र अझैसम्म यो उनीहरूको काम हो जुन ग्राहकहरूले अन्ततः रमाईलो गरिरहेका छन्। टोलीले कार्यकारी शेफ, धेरै सूफ शेफहरू र महाप्रबन्धकसँग उनीहरूको अनुभवहरूको बारेमा अन्तर्वार्ता लिएको साथ समय बितायो। नतिजाको रूपमा, तिनीहरूले कसरी उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूसँग बढी संलग्न हुन सक्दछन् र प्रेरित रहन सक्छन् भनेर फरक सोच्न थाले।
उत्पादन र मार्केटिंग अपडेटहरू। हामी तपाइँको कम्पनी र तपाइँको ग्राहकहरु बीच, साथै तपाइँको उत्पादन विकासकर्ताहरु, तपाइँको विपणकहरु र तपाइँको बिक्री मान्छे बीचको फाँट बन्द गर्न चाहान्छौं। तपाईंको मार्केटिंग र उत्पादन साथीहरूलाई उनीहरूको सबैभन्दा नयाँ र सबैभन्दा ठूलो डाउनलोड गर्न आमन्त्रित गर्नुको सट्टा, तिनीहरूलाई तिर्ने पेन्सिलको साथ उनीहरूको समाचार ल्याउन भन्नुहोस्, र उत्पादन, मार्केटि, र ग्राहकहरूको साथ तपाईंको विक्रेताहरू जडान गर्न किक-अफ समय प्रयोग गर्नुहोस्। यसले टिप # १ – तपाईंको चरम र मुख्यधारका ग्राहकहरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। यो नयाँ प्रस्तावको बारेमा ग्राहकहरुसँग कुराकानीको रूपमा पाइलट बनाउनुहोस् र सब भन्दा महत्त्व राख्ने मान्छेबाट वास्तविक-समय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने बारे सोच्नुहोस् who जसले यसलाई किन्ने छ।
कौशल निर्माण। हाम्रो अन्तिम टिप तपाईंको सेल्सफोर्सको कौशल सेटको निर्माणसँग सम्बन्धित छ। बिक्री व्यक्तिहरू सधै उनीहरूको सीप सिक्न, उनीहरूको खेल सुधार गर्न र अधिक सफलताको आनन्द लिने तरिकाहरू खोजिरहेका हुन्छन्। हाम्रो ग्राहक केन्द्रितको विषयवस्तु दिईएको छ, हामी हाम्रो मनपर्ने व्यायाम साझा गर्नेछौं:
हामी बिक्री मानिसहरूलाई पठाउन चाहन्छौं जहाँ उनीहरू अधिक सहज महसुस गर्छन् feel मैदानमा! तपाईको किक-अफको स्थानमा खुद्रा केन्द्रहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्। खुद्रा केन्द्रहरूको लागि खोज जुन कम ठाडो र उच्च अन्त्यमा मिल्दो ठाडो बीचमा जोडीहरू भेट्टाउने प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, खेलौना आर हामीलाई र बच्चाहरूको खेलौना को लागी निर्माण-एक-भालू, कारका लागि एक चेभी र Tesla डीलरशिप, र यस्तै। यो व्यायाम जोडीहरूमा सबै भन्दा राम्रोसँग गरिन्छ, र प्रत्येक जोडीको कार्य भनेको उनीहरूको दुई स्टोरहरूको भ्रमण गर्नु हो र ध्यान दिनुहोस् ध्यान दिनुहोस् कि ग्राहकको संलग्नता बढ्ने वा घट्ने कुरामा। हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंको टोलीहरू आश्चर्यजनक (र आश्चर्यजनक रूपमा भयानक) चीजहरूले उनीहरूको अनुभवबाट प्रेरित भएर फर्केर आउँदछन् र उनीहरूको आफ्नै ग्राहक सम्बन्धमा लागू गर्न सकिने ताजा अन्तरदृष्टि हुनेछ।
तपाईंको ग्राहकको दृष्टिकोणबाट तपाईंको किक-अफको बारेमा सोच्नाले तपाईंको किक-अफ योजनालाई सरल र प्रेरित गर्न सक्छ र अत्यधिक उत्पादक नतीजाहरू र सफल नयाँ वर्षमा डोर्‍याउन सक्छ। हामी तपाइँलाई तपाइँको अर्को किक-अफ हिलाउन र तपाइँको ग्राहकहरु लाई उनीहरु रहेका छन् कि राख्नको लागि यी विचारहरूको प्रयास गर्न प्रोत्साहन: सबै चीजको केन्द्रमा।
टैग: वार्षिक बिक्री बैठककिक-अफकिक-अफ बैठकमार्केटिंग अपडेटहरूउत्पाद अपडेटहरूबिक्री किक-अफबिक्री बैठकहरुबिक्री प्रदर्शनबिक्री योजनाबिक्री प्रशिक्षणरणनीतिक खाता योजनाशीर्ष बिक्री प्रदर्शनकर्ताहरू
W तरीकाहरू सजिलैसँग लिंक्डइन एकीकृत लीड जेनेरेशन फार्महरूको साथ प्रॉस्पेक्ट डाटा स Collect्कलन गर्न